Wararka - Macmiilka Booqanaya iyo Warshadooda
Booqashada Macaamilka iyo Warshadooda
Bishii Maajo 2017, Golaha Hebei ee Horumarinta Ganacsiga Caalamiga ah ayaa abaabulay bandhig qalab dhisme, kaas oo ka dhacay magaalada macmiilku ku yaal. Waan is -qornay waxaanan ka faa'iideysan karnaa fursaddan si aan u booqanno macaamilka. Waxaan soo gaarnay magaalada macmiilka maalmo ka hor waqtiga bilowga bandhigga. Intaas ka hor, hore ayaan macaamiisheena ugu wargelinnay safarkayaga.
Macmiilkii ayaa goor hore soo gaaray gegida dayuuradaha wuxuuna sugayay imaanshaheena. Kulanka kadib, qof walba aad buu ugu farxay. Markii aan fuulay baabuurka, waxaan caado u lahaa inaan u socdo dhinaca midig, anigoo aan dareemin in isteerinka baabuurka dalkoodu midig yahay. Hahaha, dhacdo xiiso leh. Ka dib markii uu fuulay baabuurkii, macaamilkii ayaa si kaftan ah u yiri: "Suunkaaga xidh, haddii kale waan ku dili doonaa", oo gacmihiisa ayuu ku taagay bastoolad. Haha, macaamiishu waxay jecel yihiin kaftan badan. Macaamilka ayaa horay noo sii ballansaday huteel, cunay oo nala degay. Dhammaan kharashyada hoyga iyo hoyga waxaa bixiyay macmiilka. Macmiil wanaagsan oo xamaasad leh.
Maalintii labaad, macmiilkii ayaa noo kaxeeyay warshaddiisii. Warshadoodu aad bay u horumarsan tahay, dhammaantoodna waa qalab otomaatig ah. Mashiinka dufanka otomaatiga ah, mashiinka quudinta, mashiinka alxanka duudduuban ee lagu sameeyay Jarmalka, mashiinka samaynta biibiilaha otomaatiga ah ee laga sameeyay Mareykanka. Wax -soo -saarkooda wax -soo -saarkoodu aad ayuu u sarreeyaa, soo -saaridda tuubo waxay qaadataa qiyaastii 3 daqiiqo kasta. Qolka kantaroolka, hal qof ayaa xakameyn kara qalabka warshadda oo dhan.
Aqoon isweydaarsiga, waxaan ku aragnay sariirta hoose ee aan soo saarnay, macaamilkuna wuxuu isticmaalayay sariirta hoose ee aan soo saarnay si uu u soo saaro tuubooyin. Macmiilku wuxuu aad uga hadlay sariirtayada hoose wuxuuna soo bandhigay shuruudo. Waxa kale oo aanu yeelanay dood faahfaahsan oo fool-ka-fool ah oo ku saabsan badeecadan oo aannu waxoogaa horumar ah ku samaynay hannaanka wax-soo-saarka.
Galabtii, macaamilka ayaa na geeyay si aan u booqano warshad kale oo kooxdooda ah. Warshadda labaad, waxaan sidoo kale ku aragnay sariirtayada hoose waxaanan dhegeysanay fikradahooda iyo talooyinkooda. Si farxad leh ayaan u wada hadalnay.
Waxaan macsalaameynay warshaddii labaad ee macmiilka. Maalintii saddexaad, waxaan u duulnay magaalo kale oo ay ku taal warshadda saddexaad ee macmiilka.
Sababtoo ah maalintani waa dhammaadka usbuuca, wershadu way xidhan tahay. Laakiin warshadu waxay diyaarisay soo -dhoweeye si uu noogu kulmo gegida dayuuradaha, waxyar kadibna waxay noo dirtay hoteelkii aan horay uga sii ballansannay Shiinaha. Waad ku mahadsan tahay diyaarinta taxaddar leh iyo fekerka leh ee warshadda.
Maalintii 4aad, waxaa masuulkii wershadda masuulka ka ahaa yimid hoteelka si uu noo qaado oo muddo yar gudaheed ku soo gaaray warshadii saddexaad ee macmiilka.
Kani waa warshad dhowaan la dhisay. Maamulaha guud ee warshadda ayaa noo sheegay in warshadan cusub lagu dhisay bil kaliya. Xawaaraha dhisme noocan oo kale ah runtii waa iga yaabiyay. Aad bay waxtar u leedahay!
Warshadda saddexaad, maan arag oo kaliya sariirta hoose ee aan samaynay, laakiin sidoo kale waxaan aragnay tijaabiyaha xamuulka tuubada oo aan hore u siinnay macaamilka waanan ilaalinay.
Warshadii saddexaad, aad ayaan nasiib ugu yeelanay inaan la kulano maareeyaha guud ee kooxda waxaannu wada hadal wacan la yeelannay maareeyaha guud ee kooxda. Maareeyaha guud ee kooxda ayaa na siiyay sumcadda sagxadahayaga hoose wuxuuna noo sheegay inay u baahan yihiin qadar weyn oo ah sariirta hoose, isagoo rajeynaya inaan sida ugu dhaqsaha badan u soo saari karno sariirta hoose ee hadhay oo aan ku gaarsiinno waqtigooda. Waxaan ballan qaadaynaa inaan ku dadaali doonno inaan dhammaystirno amarrada hadhay.
Booqashada warshadaha iyo macmiilku waa waayo -aragnimo aad u fiican oo lama ilaawaan ah. Kalsoonida ka timaadda macaamiisheenna ayaa ah dhiirrigelintayada, shuruudaha laga rabo macaamiisheenna ayaa na dhiirrigelinaya. Waxaan uga mahadcelineynaa taageerada macaamiisha.